स्वास्थ्य Archives - Page 110 of 117 - Dainik Online Dainik Online
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षले २० करोड घुस मागे : दुर्गा प्रसाई
नेपालमा गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सकिने कानूनी व्यवस्था छ । हाडनाता करणी, बच्चा र आमाको ज्यान जानसक्ने खतरा तथा विशेष परिस्थितिमा १८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सकिन्छ । तर,
धेरै कागती सेवन गर्नुहुन्छ सावधान ! गर्न सक्छ यस्तो नोक्सान
एजेन्सी । कागती हाम्रो स्वास्थ्य र सुन्दरताका लागि फाइदाजनक हुने गर्दछ। यसको सेवन गर्दा स्वास्थ्यलाई विभिन्न किसिमका लाभ प्राप्त हुने गर्दछ। यसमा भिटामिन सी र सिट्रिक एसिड भरपूर मात्रामा प्राप्त
बच्चाको खानामा अवश्य सामिल गर्नुहोस् यी चीज
एजेन्सी । सबै मातापिता बच्चाको स्वास्थ्यका बारेमा चिन्तित हुने गर्दछन्। प्राय बच्चाहरु खाना खानमा त्यती मन गर्दैनन्। त्यसैले पनि धेरै आमा बाबुलाई थाहा हुँदैन् की उनीहरुको स्वास्थ्यको ख्याल कसरी गर्ने
स्वस्थ दूधले बच्चाहरुमा मोटोपनको जोखिम कम : अध्ययन
वासिङ्टन डिसी । स्वस्थ दूध पिउने बच्चाहरु बोसोयुक्त अर्थात चिल्लो पदार्थ बढी भएको दूध पिउनेहरूको तुलनामा बढी वजन अर्थात मोटोपनको संभावना कम हुने एक अध्ययनले देखाएको छ । हालै
काठमाडाैं । स्वस्थ दूध पिउने बच्चाहरु बोसोयुक्त अर्थात चिल्लो पदार्थ बढी भएको दूध पिउनेहरूको तुलनामा बढी वजन अर्थात मोटोपनको संभावना कम हुने एक अध्ययनले देखाएको छ । हालै सार्वजनिक
मौसमी रुघाखोकीले मृत्यु, गाउँ नै थला
हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका–३ रायागाउँ निवासी एक महिलाको मौसमी रुघाखोकीले मृत्यु भएको छ । केही दिनयतादेखि फैलिएको मौसमी रुघाखोकीले गाउँ नै थला परेको छ । सोमबार राति रुघाखोकीले रायागाउँकी ३६ वर्षीया
‘ह्याण्डसम लुक्स’का लागि पुरुषहरुले ध्यानदिनुहोस् यी कुरा
एजेन्सी । महिला जस्तै पुरुषले पनि चमकदार स्किनको चाहना राख्ने गर्दछन्। सेभिंग गरेर मात्र ह्याण्डसम लुक्स मिल्दैन्।आज हामी तपाईलाई केही यस्ता उपायका बारेमा जानकारी दिदैछौँ, जुन पुरुषको सुन्दरताका लागि निकै
पेटको बोसो घटाउन चाहनुहुन्छ ? अप्नाउनुहोस् यी फर्मुला
एजेन्सी । आजको समयमा धेरैजसो मानिस मोटोपनको समस्याबाट हैरान हुने गर्दछन्। बढिरहेको वजनका कारण कुनै व्यक्तिको व्यक्तित्व पूर्ण रुपमा खराव हुने गर्दछ। कहिलेकाही मोटोपनका कारण दोस्रो व्यक्तिका सामु लज्जित हुनु
रुघाखोकीले स्वास्थ्यचौकीमा बिरामी बढ्दै, गाउँनै थला
हुम्लामा हिउँदको महिना शुरु भएसँगै जिल्लाका सातवटै गाउँपालिकामा रहेका स्वास्थ्यचौकीमा बिरामीको सङ्ख्या बढेका छन् । गत मङ्सिर महिनाको अन्तिम सातामा परेको भारी हिमपातले बिरामीको सङ्ख्या झन बढ्दै गएको छ। सिमकोट
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)को केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठक आज बस्दैछ । क्वालिटी
काठमाडौं । ईन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट (आईपीएल) टी–ट्वान्टी क्रिकेटमा कोलकत्ता नाइट राइडर्सले रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोरमाथि
काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि सुरु हुने सोह्र श्राद्ध अर्थात् पितृ पक्ष आजदेखि
नेपालमा देखिएका यी हुन कोरोनाका चार ‘घातक भेरियन्ट’
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण फैलिएको दुई वर्ष पुग्न लागेको छ। डिसेम्बर २०१९ मा
काबुल । अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता नियन्त्रणमा लिएपछि महिला र छात्राहरूको अधिकारमा निरन्तर कडाइ र बन्देज
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले विधान राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने